Solitaire game kusukela ezikhathini zasendulo kube yokuchitha isizungu intandokazi nokuzijabulisa for girls. Kubo ababikezela ikusasa, bakholwa babesaba, futhi ngezinye izikhathi - nje ukuzijabulisa. Kodwa abaningi abazi ukuthi yini yasisiza magic ikhadi namabutho lasendulo zazo ebiyelwe yonke into eyenziwa umbhuli.
Indlela yokuphila yaseNtshonalanga ubelokhu kwakufanele nomthelela ku-Russian, emasikweni amaningi, izenzakalo yamasiko, ubuciko isiqondiso wazalelwa e-Europe, bese kamuva "bafudukela" ekhaya. Amazing Eqinisweni: ngesikhathi Swedish-Polish kokungenela Russian lathathwa abezinye izizwe ukuzijabulisa ezifana Solitaire Crescent. Ukubukeka zomlando yomdlalo eRussia futhi udumo empini Russian-Turkish. Ngakho-ke, igama yokuqala solitaire - "Turkish" - kwakwandile futhi alisebenzisela izinzuzo kuphela ezokuzijabulisa, semisebenzi yokuzilibazisa. Kwakuyingozi nje umdlalo. Crescent solitaire aliveza intombazanyana, kubutsela kusihlwa phezu inkomishi yetiye, ukuxoxa izitayela fashion kanye zakamuva, inhlebo kanye namaphupho. Kodwa Kungadingekani iminyaka eminingi ngaphambi kokuba Crescent baba nokuzindla okuthiwa, esetshenziswa ukuze athobe umphefumulo, thola ngokuvumelana nokuthula kwengqondo. Kukholakala ukuthi kudinga ukugxilisa ingqondo konke okusemandleni, ukuthi ivumela exchange of energy ne astral, omunye emhlabeni.
Crescent Solitaire isibe umsebenzi sina, waba sovershestvovatsya. Kunezindlela entsha izakhiwo ezifana "Blondes futhi brunettes," "Injabulo nosizi," "Abane isifiso." Abesifazane kahle amasu ekhethekile namasu inkositini ukuthi Kwakudingeka ikhono elingavamile. Ngaphezu kwalokho, ngokubekezela langokududuzwa ungase ebhula, ukuqagela umshado nothando ngisho ukuvimbela ukufa.
Ukubeka: izici izimfihlo
Umumo Solitaire kuyinto simo lapho arc, futhi igama wathola ngenxa olungcwele Islamic - ngenyanga. Ngokuvamile libizwa ngokuthi "Dendrovsky Zodiac" futhi "Ibhetri". Lokhu ukubhula kubhekwa elula, ngoba umphumela, ungathola impendulo ecacile yalo mbuzo.
Injongo eyinhloko sakwaGadi - ukuqoqa solitaire, ugcine zonke imithetho esingashiwongo. Crescent Solitaire - indlela zikanokusho lokuzijabulisa, ngomzamo lokubheka isikhathi esizayo, umsebenzi wangempela ubuchopho. Ngo inqubo ukuguquguquka amakhadi abathintekayo Nenkabazwe kwesokudla, obhekene umuzwa kanye ngeso kwezithombe, ukucabanga okunye okungekhona ukukhuluma. It sifana umdlalo kwengane, ngoba izikhathi umdlalo ingane yandisa isimo sakhe sengqondo kuba ukhulile, ezijulile ifunda emhlabeni. Kanye esekhulile, iyengelwa solitaire bakwazi ukuthuthukisa umbono ngemilingo, uyakwazi ukwamukela izinkolelo ezingaqondakali izimfihlakalo yonke.
Ukuze solitaire usebenzisa ezimbili onezitezi of amakhadi 52, ngamunye pre-bahlanza of onke amakhosi Aces, ebeka ilandelana ovundlile etafuleni. Amakhadi asele babizwa shuffled futhi kufanele wawanda ngesimo ucwezana ukwakha izitaki eyishumi nesithupha (ngasinye kufanele kube amakhadi eziyisithupha). Ikhadi ngaphakathi landelana phendla nichitha amakhosi abo kusuka kwezinkulu kwehle (ukunciphisa par value ikhadi), kanye Aces - ku-uplink. Uma kungenzeka hambisa khona, imithetho uvumele ukuyikhipha ikhadi phansi kusukela inqwaba awubeka phezu kwawo. Nokho, lokhu iqhinga ivumela izikhathi abangeqile kwabathathu umdlalo ngamunye. Uma Solitaire ukubola kahle, khona-ke impendulo yalo mbuzo ngoyebo, futhi uma kwenzeka oyifunayo engase yenzeke kulowo mcimbi. Re ukuqagela isifiso esinjalo is hhayi Kunconywa nge isiphetho ihlaya yingozi.
Idlalwa kanjani i-poker - imithetho. imithetho Poker. Isenzo esiyingozi imidlalo
Pyelonephritis: izimbangela kanye nezimpawu
Umsebenzi umthwebuli wezithombe. Passion gainful
Game Crossy Road: indlela ukuvula uhlamvu imfihlo